သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေးအဖြေ | Lumyo Chit
ဗွီအိုအေ ဌာနချုပ်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ နယ်ပယ်စုံမှာ ပုဂ္ဂိုလ်များ တွေ့ဆုံစဉ်။ (မေလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၃)။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ။ အခု ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ကနေ ပြီးတော့ မြန်မာ နိုင်ငံကို ရုပ်မြင် သံကြား ကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မယ့် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အထူး သဖြင့် ဗွီအိုအေ အပါ အ၀င် ဗွီအိုအေ ကနေ အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပ ပေးမယ့် ဒီစီ အနီး တ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ အသိုင်း အ၀ိုင်း ကနေ ပြီးတော့၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူငယ် ရေးရာ ဘက်ပေါင်းစုံက အသိုင်း အ၀ိုင်းက သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ပြီးတော့ မေးချင် တာ၊ နှုတ်ဆက် ချင်တာတွေနဲ့ အတူ တွေ့ဆုံ ပွဲကို စတင် ပါပြီ ခင်ဗျ။
အထူး သဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တွေမှာပဲ အများ အားဖြင့် တွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ Town Hall meeting လို့ခေါ်တဲ့ မြို့တော် ခန်းမ ပုံစံမျိုး၊ ရင်းရင်း နှီးနှီး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း တွေ့ဆုံ ပွဲကို သမ္မတကြီး အနေနဲ့ လိုလို လားလားနဲ့ ကျနော် တို့ဆီကို လာပြီးတော့ အခုလို လာပေးတာ ကျေးဇူးတင် ကြောင်း အရင် ပြောပါ ရစေ။ အလား တူပဲ တက်လာတဲ့ ပရိသတ် တွေဆိုရင်လည်း သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံ ခွင့်ရပြီးတော့ အားလုံး အနေနဲ့ ရိုးရိုး သားသား ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မေးစရာ ရှိတာလေး တွေကို မေးပြီးတော့ သမ္မတကြီး ဆီကလည်း ပွင့်လင်း ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေ တွေကို ရနိုင် လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကန့် အသတ်လေး နည်းနည်း ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် မေးခွန်းတွေ၊ မှတ်ချက် လေးတွေ ပေးရင်တော့ အချိန် အတိုင်း အတာလေးနဲ့ ဖြစ်စေ ချင်ပါတယ်။ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်း တွေကို ပေးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိုလို့ သမ္မတကြီး ပြောတဲ့ အကြောင်း အရာ လေးတွေ နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အားလျော်စွာ ကျနော် ခေါ်ပြီးတော့ မေးခွန်း လေးတွေ မေးခွင့်ပေး ပါမယ်။ ဒီထောင့်မှာ လာပြီးတော့ မေးခွန်း မေးပေး ဖို့ပါပဲ။
ကျနော့် အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ကတော့ မေးချင်တဲ့ အကြောင်း ကတော့ သမ္မတကြီး အနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ၄၇ နှစ်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတ အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို တရားဝင် အလည် အပတ် ရောက်ရှိ လာတယ်။ အဲဒီမှာ သမ္မတကြီး အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမား နဲ့လည်း မနက်ဖြန် ဆိုရင် တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီသမိုင်းဝင် ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ သမ္မတကြီး အနေနဲ့ ဘယ်လို မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့အကျိုး အတွက် ရလဒ် တွေကို မျှော်မှန်း နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိထား ပါလဲ ဆိုတာ လေးကို သမ္မတကြီး အနေနဲ့ အတို ချုပ်လေး ရှင်းပြ ပေးစေ ချင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ သမ္မတကြီး ဦးဆောင် ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် တွေရဲ့ လက်ရှိ အခြေ အနေ၊ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ အကြောင်းလေး တွေကိုလည်း အတိုချုပ် ရှင်းပြ ပေးစေ ချင်ပါတယ်။ အဲဒါ ပြီးရင်တော့ ပရိသတ် ထဲက မေးစရာ ရှိတာလေး တွေကို သမ္မတကြီး အနေနဲ့ ဖြေကြား ပေးစေ ချင်ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ အားလုံးပဲ တက်ရောက် လာကြတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ကျနော့် အနေနဲ့ ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ပြောကြား ချင်ပါတယ်။ ဒီမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်နေ ပေမဲ့လည်း မြန်မာ နိုင်ငံသား တွေဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်ထဲ မှာတော့ စောစော ကပြော သလိုပါပဲ။ ကိုယ့်သွေး ကိုယ့်သား တွေလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ သဘောထား ပါတယ်။ ခင်ဗျား တို့နဲ့ တွေ့နိုင်အောင် အခုလို စီစဉ် ပေးခဲ့တဲ့ ဗွီအိုအေက တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေလည်း ကျေးဇူး တင်ကြောင်း ကျနော် ပြောလို ပါတယ်။ စောစောက ကျနော် ပြောသလို ပါပဲ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံ ရေးဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဆိုတော့ လွတ်လပ် ရေးတောင် မရသေး ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေး မရခင် ကတည်း ကျနော် တို့က သံတမန် ဆက်သွယ်မှု ရှိခဲ့တယ်။ နောက် ဟိုတုန်း ကတော့လည်း သွားလာ ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၁၉၅၅ ခုနှစ်က ဆိုလို့ ရှိရင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု ဒီကို လာခဲ့ ပါတယ်။ ဧည့်သည် အဖြစ်နဲ့။ နောက် တခါ ၂ နှစ် အကြာ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ သမ္မတကြီး ဦးမန်းဝင်းမောင် က ဆေးဝါး ကုသဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဒီကို လာခဲ့ ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း ပေါ့လေ။ တရားဝင် အလည် အပတ် ခရီး လာခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၁၉၆၆ ခုနှစ်က နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ အဆက် အသွယ်တွေ ပြတ်သွား ကြတယ်။ အသွား အလာတွေ နည်းသွား ကြတာ အခု ကျနော် ရောက်တဲ့ အချိန် ထိဆိုရင် အားလုံး ကျနော်တို့ ၄၇ နှစ်။ ၄၇ နှစ်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ တာဝန် ရှိတဲ့ အကြီး အကဲ တယောက် အနေနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံကို၊ မြို့တော် ၀ါရှင်တန်ကို ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး ဟာ သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်မှာ ပြန်လည် ပြီးတော့ ပွင့်လင်း သွားပြီးတော့ မှ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံ ရေးဟာ နွေးနွေး ထွေးထွေးနဲ့ ကျနော်တို့ ရှိလာတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် အဆက် အသွယ် အကျိတ် အခဲ တွေပေါ့နော်။ အခက် အခဲတွေ ရှိနေရာ ကနေ အခုတော့ ကျနော်တို့ နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ် ရေးဟာ သမ္မတ အိုးဘားမားရဲ့ ကျင့်သုံးတဲ့ ပေါ်လစီ အရ ပြန်လည် ပြီးတော့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံ မှုတွေ၊ ဆက်သွယ် မှုတွေ ကျနော်တို့ ရှိလာ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လာရတဲ့ ခရီးစဉ်ရဲ့ အဓိက ကတော့ နှစ်နိုင်ငံ ကျနော် တို့ရဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးမှုကို ဆက်လက် ပြီးတော့ အဓွန့် ရှည်အောင် တည်ဆောက် နိုင်ဖို့ အတွက် ဒါ ကျနော်တို့ လာရောက် လည်ပတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အဓိက အကြောင်း တစ်ချက်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက် မှုတွေ၊ ကျနော်တို့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက် အခဲတွေ၊ ကျနော် တို့ရဲ့ ရှေ့အလား အလာတွေ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံ အနေနဲ့ အဘက်ဘက် ကနေပြီးတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အပေါ် နားလည်မှု ရှိဖို့၊ တချို့ အခက် အခဲတွေ ကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်မယ့် ဟာတွေကို ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ဒီလို ရည်ရွယ် ချက်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဒါ သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ နောက်ထပ် အကြောင်း အရာ တစ်ခုကို မဆက် ခင်မှာပဲ အခု ပရိသတ် ထဲမှာ မေးချင်တဲ့ သူတွေ ထဲက သမ္မတကြီး အခု ရှင်းပြတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို လာရတဲ့ အကြောင်း ရင်းတွေ ထဲမှာပဲ ပါတဲ့ အချက်လေး တခု ကတော့ အမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် အတု ယူစရာ ဘာများ ရှိပါသလဲ။ ကိုအောင်သူငြိမ်းက မေးချင် ပါတယ်။ ကိုအောင်သူငြိမ်း ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ နေနေတဲ့ သူပါ။ အဲဒီတော့ ကိုအောင်သူငြိမ်း အနေနဲ့ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်း လေးကို မေးစေ ချင်ပါတယ်။
ဦးအောင်သူငြိမ်း။ ။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ် သမ္မတကြီး ခင်ဗျ။ ကျနော် အောင်သူငြိမ်းပါ။ ကျနော် ဗဟု ဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့ ကပါ။ သမ္မတကြီးတို့ ဖိတ်ခေါ်မှု နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော် တိုင်းပြည် ကိုလည်း ပြန်ရောက် ပါတယ်။ တချို့ သုတေသန လုပ်ငန်းလည်း ကျနော် လုပ်ပါတယ်။ ကျနော် မေးချင်တဲ့ မေးခွန်း ကတော့ အခုလို ဒီအမေရိကန်ကို လာပြီးတော့ ဒီသမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကနေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက အတု ယူစရာ၊ လေ့လာ စရာ ဘာတွေ ရှိမလဲ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် ပထမ မေးချင် ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒုတိယ ကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး စနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သမ္မတကြီးရဲ့ခရီးစဉ် အတွင်း ဘယ်လို အထောက် အပံ့ အကူ အညီတွေ ရနိုင်မလဲ။ မျှော်လင့် နိုင်မလဲပေါ့။ ဒါလည်း ကျနော်တို့ သိချင် ပါတယ် ခင်ဗျ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်။ ။ အဲဒီတော့ ပထမ မေးခွန်း အနေနဲ့ ကျနော်တို့ အမေရိကန် နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံး လာတာ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေး ကျနော်တို့ ရခဲ့တယ်။ ရခဲ့ ပြီးတော့ တက်လာတဲ့ အစိုးရဟာ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ အစိုးရပါ။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ ၁၄ နှစ်ပေါ့နော်။ သက်တမ်း အားဖြင့် ၁၄ နှစ်ပဲ ကျနော်တို့ ကြာညောင်း ခဲ့ပြီးတော့၊ ကျန်တဲ့ အချိန် တွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု၊ လုံခြုံမှု အခြေ အနေ တွေအရ တပ်မတော်ကပဲ တလှည့် တပြန်စီ တာဝန်ယူ သွားရတာ။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကျနော်တို့ ကင်းကွာတာ အတော် လေးလည်း ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကင်းကွာတာ အတော် လေးကြာခဲ့ပြီ။ နောက်တခါ အခု ကျနော်တို့ အစိုးရ တက်လာတော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း ကျနော်တို့မှာ အချိန်ကာလ အားဖြင့်က နှစ် နှစ်ပဲ ကျနော်တို့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာ အတွေ့ အကြုံတွေ၊ အလေ့ အကျင့်တွေ အများကြီး နည်းပါ သေးတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို ကျင့်သုံး နေတဲ့ နိုင်ငံကြီး အတွက်တော့ ပြည်သူတွေ ပိုင်းကလည်း ဒီိမိုကရေစီကို အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့် ရသလို၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ရှိမှု တွေကလည်း အပြည့်အ၀ ပြည်သူတွေက ခံယူထား တယ်လို့ ကျနော် နားလည် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တဘက် ကလည်း ဒီအခွင့် အရေးတွေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အပြည့်ဝ ယူချင်သလို၊ တဘက် ကလည်း အမေရိကန် ပြည်သူ တွေလို ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တာဝန်ရှိ မှုတွေ၊ တာဝန် သိမှုတွေ ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အတွက် အတု ယူဖွယ်ရာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော့် အနေနဲ့ ပြောချင် ပါတယ်။ ဒါက မေးခွန်း တခုပေါ့။
ဒုတိယ မေးခွန်းက ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တိုင်းပြည်တွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် ပညာရေးဟာ အင်မတန်မှ အဓိက ကျပါတယ်။ ပညာရေးဟာ အဓိက ကျပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပညာရေးဟာ ကျနော်တို့ လေ့လာ ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒီ လွတ်လပ်ရေး စရပြီးတဲ့ ကာလတွေ အပိုင်းမှာ အရှေ့တောင် အာရှမှာ ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပညာရေးဟာ အတော်လေးကို ရှေ့တန်း ကျကျနဲ့ ရှိနေတဲ့ အနေ အထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်း ကလည်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်ကြီး တွေမှာ နံမည်ကြီး တက္ကသိုလ်ကြီး တွေမှာ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးတွေ။ သူတို့ကနေ တဆင့် တက္ကသိုလ် တွေမှာ ပြန်လည် သင်ကြား ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော် တို့ရဲ့ ပညာရေးဟာ ပြောရမယ် ဆိုရင် အရှေ့တောင် အာရှတင် မဟုတ် ပါဘူး။ အာရှမှာပါ ရှေ့ကနေ ပြီးတော့ ပြေးနေတဲ့ အနေ အထား ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်း မှာတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေ အနေ တွေအရ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ အနောက် နိုင်ငံ တက္ကသိုလ် တွေကနေ၊ နံမည်ကြီး တက္ကသိုလ် တွေကနေ ဘွဲ့ရတဲ့ ဆရာကြီးတွေ၊ ဆရာမ တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသက် အရွယ် တွေကြီး လာတာ။ တချို့လည်း ပင်စင် သွားကြတယ် ဆိုတော့ အဆက် အသွယ်တွေ ပြတ်သွားတဲ့ အနေ အထားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆက်ပြတ် သွားတဲ့ အနေ အထားမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တော့ ပညာရေးဟာ တကယ်တော့ တိုင်းပြည် တပြည် ထူထောင်ဖို့ အတွက် အရေး ကြီးဆုံး အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး ကိုလည်း ကျနော်တို့ အလေး ထားပြီးတော့မှ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ ကျနော်တို့ လိုပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပညာရေးကို မြှင့်တင်ဖို့ အတွက် ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ ဘက်ပေါင်းစုံ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံနဲ့ ကျနော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ပညာရေးဟာ ပြောင်းလဲ နေတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ အရဆိုရင်တော့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ထိထိ ရောက်ရောက် ၀င်နိုင်တဲ့ ပညာရေး မျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ ကျနော်တို့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေ ဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ စက်ရုံတွေ ဆောက်မယ်။ အလုပ်ရုံ တွေဆောက်မယ်။ ပြီးရင် ဒီ စက်ရုံတွေ အလုပ်ရုံတွေ ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ skill labor တွေ လိုလာတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီမှာ ဘွဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ၊ သိပ္ပံဘာသာရပ်၊ ၀ိဇ္ဇာဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ။ ဒီကလေး တွေက အလုပ်ရုံ စက်ရုံထဲကို ဘွဲ့ရပြီးတော့ တိုက်ရိုက် ကူးဝင်လို့ ရမလား ဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာ မရနိုင် သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ ပညာရေး စနစ်မျိုး မဟုတ်သေးဘူး။ မဟုတ် သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ vocation training ခြောက်လ တန်သည်။ တစ်နှစ် တန်သည် ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် ကျနော်တို့မှာ ဘာတွေ လိုအပ် သလဲ။ အင်ဂျင်နီယာတွေ အများကြီး လိုအပ် နေလား။ ဆရာဝန်တွေ အများကြီး လိုနေလား။ အဲဒီတော့ တက္ကသိုလ် ကနေ မွေးထုတ် ပြီးတော့ ဘွဲ့ရတဲ့ ကလေး တွေဟာ တိုက်ရိုက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ၀င်ပြီးတော့ အကျိုး ပြုနိုင်တဲ့ ပညာရေးမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒီပညာရေး မျိုးဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ဒီကနေ့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် နေတယ်လို့ ပြောရမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ပညာရေးနဲ့ တဆက်ထဲပဲ အခု ဒီမှာရောက် နေတဲ့ ပညာတော်သင် ထဲက ပဲပေါ့နော်၊ Humphrey Fellow ပေါ့၊ သူက ဒေါ်မာမာသွင်ပါ။ သူကလည်း အလားတူ မေးခွန်းလေးပဲ မေးထားတော့ သူ့ရဲ့ မေးခွန်းကို ဖတ်ပြ လိုက်ပါ့မယ်။ လောလောဆယ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာတော်သင် ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Exchange Program တွေကို သမ္မတကြီး ဒီမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘာတွေမှာ ထူးထူး ခြားခြား လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိပါသလဲ ခင်ဗျ။ အထူး သဖြင့် မနက်ဖြန် ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ၀ါရှင်တန် မှာရှိတဲ့ Johns Hopkins မှာ သွားရောက် ပြီးတော့ စကားပြောမယ်၊ တွေ့ဆုံ ဖို့တွေ ရှိတယ် ဆိုတော့ အထူး အစီ အစဉ် လေးတွေများ မြန်မာ နိုင်ငံ ကနေပြီးတော့ အဆင့်မြင့် ပညာတွေကို လာပြီးတော့ သင်ဖို့ ကိစ္စ လေးတွေများ အစီ အစဉ် ရှိပါသလား။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စက အမေရိကန် နိုင်ငံတင် မဟုတ် ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ခုန ကလို ထိုက်သင့်တဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုတွေ ပြုပေးဖို့။ အထူး သဖြင့်တော့ ကျနော် တို့ဆီက ပညာတော် သင်တွေကို လက်ခံဖို့။ နောက်တခု ကလည်း ပညာတော် သင်တွေကို လက်ခံ ပေးတယ် ဆိုရင်လည်း သူတို့က သင်ပေး ပေမယ့် စရိတ် စကတို့ ဘာတို့ နေရေး အတွက်၊ စားရေးအတွက် ဒါကတွေ ကလည်း ရှိနေတော့ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင် လို့ရှိ ရင်တော့ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိနေတဲ့ တက္ကသိုလ်မျိုး ကျနော်တို့ ပညာတော် သင်တွေကို လက်ခံ ပြီးတော့ သင်ပေးမယ့် တက္ကသိုလ် ခွဲတွေပေါ့၊ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ အခု Johns Hopkins တက္ကသိုလ်တို့ ဘာတို့ဆို ကျနော်တို့ တွေ့ပါတယ်။ ဥက္ကဌတို့ ဘာတို့ နဲ့လည်း တွေ့တယ်။ ခင်ဗျား တို့ဗျာ ကျနော်တို့ ဒီမှာ လာပြီးတော့ တက်ဖို့ ပညာတော် သင်ကို လက်ခံ ပေးမယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့မှာ ခုနကလို စားစရိတ် ကြီးတာတွေ၊ နေရေး ထိုင်ရေးအတွက် စရိတ်ကြီး တာတွေ ဒါတွေက ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ မလုပ် နိုင်ဘူး။ ဥပမာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ရှိတဲ့အနက်က ၂ ယောက်လောက် လွှတ်ပြီးတော့ သင်ယုံနဲ့က ဘာမှ ကျနော် တို့က အကျိုး မရှိနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင် လို့ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ တက္ကသိုလ် ခွဲတွေ လာပြီးတော့ ထူထောင် ပေးပါ။ ကျနော် တို့မှာ ရှိပါတယ် နေရာတွေက အစ။ ဒါကို ကျနော်တို့ အဓိက အလေး အနက် ထားပြီးတော့ ပထမတော့ ကျနော်တို့ ပညာတော် သင်တွေကို။ များများ သင်ပေးနိုင် ဖို့အတွက်က ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ လာပြီးတော့ ဌာနခွဲ တွေကို လာရောက် ဖွင့်ပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပြောဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ မနက်ဖြန် တွေ့တဲ့ ပြုတဲ့ အခါမှာလည်း ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိုက်ဆိုင် လာရင် ဒီကိစ္စကို ပြောမယ်လို့ ကျနော်တို့ စိတ်ကူး ထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ သမ္မတကြီးရဲ့ ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ အားလုံး သေသေ ချာချာ အလေး အနက် ထားပြီးတော့ လေ့လာ ကြည့်ရှု နေကြတဲ့ အချက် ကတော့ အမေရိကန် – မြန်မာ ဆက်ဆံ ရေးပေါ့။ အမေရိကန် မြန်မာ ဆက်ဆံရေး မှာလည်း လောလောဆယ် အားဖြင့် အမေရိကန် မြန်မာ ဆက်ဆံ ရေးဟာ ပြန်ပြီး နွေးထွေး လာတယ် ဆိုတာ သမ္မတကြီး လည်း အစောပိုင်းက ပြောပြခဲ့ ဘူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း အမေရိ ကန်နိုင်ငံ အနေနဲ့က လောလောဆယ် ပိတ်ဆို့ ကန့်သတ် ထားမှုတွေကို ချန်ထား တာလေးတွေ ရှိနေသေး တယ်ခင်ဗျ။ အကုန် မရုပ် သေးပဲနဲ့။ အဲဒီတော့ ဒီကန့်သတ် ချက်တွေကို သမ္မတ ကြီးရဲ့ ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ လွှတ်တော် ပိုင်းကရော၊ ဥပဒေ ကြောင်းပိုင်း ကရော ကြေကြေ လည်လည် ရုပ်သိမ်း သွားရေး အောင်မြင် အောင် ဆောင်ရွက်သွား နိုင်မယ်လို့ ယူဆ ပါသလား။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ကျနော်တို့ Sanction ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ ခင်ဗျား တို့လည်း အားလုံး ကြားထား ကြပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီကနေ့ ကျနော် တို့ရဲ့ ပြည်သူ အများစု ကတော့ ၊ ပြည်သူ အများ အနေနဲ့ တူညီတဲ့ သဘောဆန္ဒ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တခုကတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် အေးအေး ချမ်းချမ်းနဲ့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ ဒါဟာ လူတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒ သဘော ထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာက ခုနကလို နိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စပေါ့။
အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေး အရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုတွေလည်း ပြည်သူ လူထုရဲ့ ဒီဆန္ဒတွေ အပေါ် မူတည် ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်အောင်၊ ကျနော် တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အားလုံး ပါဝင် နိုင်အောင်၊ ဒါတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ပေးမှာပါ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးတာ ပြုပေးတာက အစပေါ့။ နောက်တခု ကလည်း ကျနော်တို့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်လောက် ရှိကြခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ပြည်သူ တွေဟာ အင်မတန် မှကို ညည်းငွေ့ နေကြ ပါတယ်။ တချို့ အတွင်း ပိုင်းကျတဲ့ မြို့ကြီး တွေမှာ မသိသာ ပေမယ့်လည်း နယ်စပ် ဒေသ တွေမှာ ဒါတွေကို ခါးစည်း ပြီးတော့ ခံနေ ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျနော်တို့ လိုချင် နေကြ ပါတယ်။ ဒီလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်း ဖို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ကြိုးပမ်း နေတာ ခင်ဗျား တို့လည်း ကြားပါတယ်။ ခင်ဗျား တို့လည်း သိပါတယ်။
နောက်တခု ကတော့ ခုနကလို ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဖို့ အတွက် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းဖို့၊ လုံခြုံဖို့၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ လိုအပ် သလိုပဲ တဘက် ကလည်း လူမှု စီးပွားရေးတွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးတက် ရင်ပဲ လူမှုရေး ကလည်း ထပ်ချပ် မကွာ လိုက်လာ တာဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တယ်၊ အလုပ် အကိုင်တွေ ရတယ်။ အလုပ် အကိုင် တွေရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ၀င်ငွေတွေ ရလာတယ်။ ၀င်ငွေတွေ ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် နေနိုင်တယ်၊ စားနိုင်တယ်။ ကလေး တွေကို ကျနော်တို့ ကျောင်းထား နိုင်တယ်။ နေထိုင် မကောင်း ဖြစ်ရင် ကျနော်တို့ ဆေးဝါး ကုသ နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးဟာ ဒွံတွဲ ပြီးတော့ ပါလာတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာ ကျနော်တို့ စီးပွားရေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဖြစ်ဖြစ် မြောက်မြောက် ဖြစ်အောင် ထူထောင်ဖို့ ကြတော့ ကျနော်တို့မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိတယ်။
လိုအပ်ချက်က တစ် အချက်က ဘာလဲဆိုရင် ကျနော် တို့မှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ အရင်း အနှီး ကျနော် တို့မှာ လုံလုံ လောက်လောက် မရှိဘူး။ ပြည့်ပြည့် စုံစုံ မရှိဘူး။ နောက်တစ်ခု ကတော့ နည်းပညာ ပိုင်းပေါ့။ နည်းပညာ ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့က နောက်ကျ နေတယ်။ တတိယ အချက် ကတော့ လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်တွေ။ လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်တွေ ကတော့ ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ အခုပဲ နေရာ အနှံ့မှာ တက္ကသိုလ်တွေ ထောင်ပြီးတော့ အခုမှ မွေးမြူ နေရတဲ့ အနေ အထား ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အရေ အတွက်တွေ ကတော့ အထိုက် အလျောက် ကျနော်တို့ ရတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီအရေ အတွက် တွေကို အရည် အချင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖို့ မှာ ကျောင်းက ပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်း ခွင်မှာ ၀င်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ် နိုင်တဲ့ အရည် အချင်းတွေ ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် တို့မှာ အရင်း အနှီး မရှိဘူး။ နောက် နည်းပညာ နောက်ကျ နေတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ မှုတွေကို ကျနော် တို့က ဖိတ်ခေါ် ရတာ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု တွေကို ဖိတ်ခေါ် ရတာ။
အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို လာပြီးတော့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ချင်ကြ ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့မှာ သဘာဝရဲ့ အခြေခံ အရင်း အမြစ် တွေက ကျနော်တို့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ gas တွေ၊ oil တွေ၊ သစ်တောတွေ၊ သားငါး တွေရှိတယ်။ ရာဘာ တွေရှိတယ်။ နောက်တခါ စားသုံးကုန် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း အစား အသောက် မျိုးစုံ ထုတ်လုပ် နိုင်တဲ့ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ဒါတွေ ကျနော်တို့မှာ ရှိနေတယ်။ ရင်းနှီးချင် တဲ့နိုင်ငံတွေက အများကြီးပါ။ အခုလည်းပဲ ခုနကလို တစ်ရက်ခြား နီးပါးလောက်က အမြဲတမ်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ နေရတဲ့ အနေ အထား ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြားသားက လာရောက် ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ငွေထုပ်ကြီးကို ပိုက်ပြီးတော့ ကျနော် တို့နိုင်ငံကိုလာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ချစ်လွန်း အားကြီးလို့၊ ကျနော်တို့ကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေချင်လို့ လာပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ တာမဟုတ် ပါဘူး။ ဒီရည်ရွယ် ချက်က နည်းပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သူတို့ အတွက် ဘာအကျိုး ရှိမလဲ၊ အကျိုး အမြတ် ဘယ်လောက် ရနိုင် မလဲ။ နောက်တစ်ခု သူတို့ကို ဘယ်လို အကာ အကွယ် ပေးမလဲ။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်း ချက်တွေက ဘာတွေရှိလဲ ဒါတွေကို သူတို့ ကြည့်မယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဘာတောင်း လဲဆိုတော့ ပထမဆုံး Foreign Investment Law ကိုတောင်းတယ်။ အဲဒီတော့ Foreign Investment Law နဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျနော်တို့မှာ ဥပဒေဟာ ပတ်ဝန်းကျင် မှာရှိနေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ချင်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ မဖြစ်ဘူး။ မဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီ Foreign Investment Law ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပြန်ပြီးတော့ ရေးဆွဲတယ်။ နိုင်ငံ လေး ငါး ခြောက်နိုင်ငံ လောက်ကို စံနမူနာ ယူပြီးတော့မှ ဒီ law ကို ကျနော်တို့ ပြန်ရေး ဆွဲတယ်။ ရေးဆွဲ ပြီးတော့မှ လွှတ်တော်ထဲ မှာလည်း တော်တော်လေး အခြေ အတင် ဆွေးနွေးကြ၊ ပြုကြနဲ့ ဒီလိုတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ရ ပါတယ်။ အခုတော့ ခုနကလို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေဟာ ကျနော်တို့ ပြဌာန်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက် ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မယ့်နိုင်ငံ တွေကလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဥပဒေကို သဘောကျ ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲ တခု ကတော့ ကျနော်တို့ ကျော်လွှား နိုင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတာ။ စက်ရုံတွေ ဆောက်တယ်။ အလုပ်ရုံ တွေဆောက်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်း တွေထုတ်တယ်။ ထွက်လာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တွေကို မ၀ယ်ဘူး၊ မပြုဘူး ပိတ်ပင် ထားတယ် ဆိုရင် ဘယ်သူမှ လာပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒုတိယ အခက် အခဲ ကတော့ ဒီဟာက sanctions နဲ့သွား ပြီးတော့ ဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ကိုလိုလားတယ်။ ခုန ကလို ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှေ့ကို ဆက်ပြီးတော့ ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုး စေချင်တယ် ဆိုရင် ဒါ ဒီမိုကရေစီနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ စီးပွားရေး ဟာလည်း တခုနဲ့ တခုဟာ ကွင်းဆက်လို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် ဒါကို စာနာ ထောက်ထား သင့်တယ်။ ဒါတွေ အခက်အခဲ အတား အဆီး တွေကို ဖယ်ရှား ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဒါလေး ကိုတော့ ကျနော် ပြောမယ် ပြောပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ သမ္မတကြီး ဆိုလိုချင်တဲ့ သဘော ကတော့ အနောက် နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့ ထားမှုကို ရုတ်သိမ်းဖို့ အထူး လိုအပ်နေပြီ။ လိုအပ် နေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ရှိမှာ တဖက် မှာလည်း အလုံးစုံ မဖြေဖျောက် နိုင်သေးတဲ့ ကိစ္စက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲတဲ့ အပေါ်မှာ သူတို့ ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ် နေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲလို ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ့မှု လုပ်ငန်း တွေမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတားအဆီး လေးတွေ၊ အခက်အခဲ လေးတွေ၊ မပြေပျောက် နိုင်သေးတဲ့ အချက် လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ လေးတွေကို တချက် လောက်ပြန် ပြောပြပေး ပါလား။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ကျနော် စောစောက ပြောသလိုပေါ့။ ကျနော်တို့မှာ သက်တမ်း အားဖြင့် ၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါအစိုးရဲ့ သက်တမ်း လွှတ်တော်ရဲ့ သက်တမ်းပေ့ါ။ နောက်ပြည်သူ လူထုကလည်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကင်းကွာနေတာ ကြာခဲ့ပြီ။ အတွေ့ အကြုံ နည်းတယ်။ အလေ့ အကျင့်က နည်းတယ် ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့်၊ တစ်အချက်က လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး ပိုင်းက ပေးသင့် သလောက် ကျနော်တို့ ကပေးပြီး သွားပြီ။ တချို့ ကိစ္စတွေ ကျတော့လည်း ကန့်သတ် မှုတွေ ကျနော်တို့ ရှိခဲ့တယ်။ ပြည်သူ အပိုင်း ကလည်း တာဝန် ယူမှု၊ တာဝန် ရှိမှု၊ တာဝန် သိမှုက နည်းပါး သေးတယ်။ နည်းပါး သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် တချို့ ကိစ္စ တွေမှာလည်း ကျနော်တို့ အရေးယူ ရတာတွေ ဆောင်ရွက် ရတာတွေ၊ ဒါတွေ ကျနော်တို့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို အကြောင်းပြပြီး ဒီအပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သဘောထား တွေရှိပါတယ်။ အဲတော့ ကျန်တာ တွေကတော့ ကျနော်တို့ တက်နိုင် သလောက်တော့ ကျင့်သုံးတဲ့ စနစ်နဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်အောင်လို့ ကျနော်တို့ များစွာ ပြောင်းလဲပြီး ပေးနေတယ်။ သို့ သော်လည်းပဲ တချို့ ကိစ္စတွေက ဥပမာ ကျနော်တို့ ဆိုကြပါစို့ ယုံမှား သံသယဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ တွေလည်း ကျနော်တို့ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဥပမာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ လက်နက် ခဲယမ်း ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ဆက်သွယ် တယ်တို့၊ သံသယ တွေနဲ့ ကျနော် တို့ကို စောင့်ကြည့် နေတဲ့ သဘော ပါပဲ။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အဏုမြူ လုပ်နိုင်တဲ့ အနေ အထားလဲ မရှိပါဘူး။ ပိုက်ဆံလည်း မရှိပါဘူး။ အတတ် ပညာလည်း မရှိပါဘူး။ သူများ ကလည်း ဘယ်သူမှ ကျနော်တို့ကို လာပြီး လုပ်ပေးမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ လုပ်ရင်လည်း ကျနော်တို့ အကုန်လုံး ၀ိုင်းပြီးတော့ ကန့်ကွက် ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားကို ကျနော်တို့ ဆက်ဆံ ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဟိုတုန်းက ကျနော်တို့ အကုန် ပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ အခါမှာ ကျနော် တို့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်၊ ကိုယ့်ကို ကူညီနိုင်မယ့် နိုင်ငံကို ရှာရတာပါ။ သံတမန် ဆက်သွယ် မှုတော့ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီဘက်ပိုင်း မှာတော့ ကျနော်တို့ အစိုးရ တက်လာတဲ့ အခါမှာ စစ်ရေး အားဖြင့် ဆက်သွယ် မှုတွေ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ သံတမန် ပဲရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ အနည်းလေး မယုံ သင်ကာမှု တွေနဲ့ ရှိတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ခုနကလို ကျနော်တို့ကို sanction တွေရုတ်ပေးပါ၊ ရုပ်ပေးပါလို့ ပြောပေ မဲ့လည်း၊ သူတို့ရဲ့ အခြေ အနေက ဒီလို ကြည့်နေ ရတဲ့ အခြေ အနေ ရှိနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော် အတင်း အကြပ်တော့ မတောင်း ဆိုပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဆိုရင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ လိုတယ်။ အဲတော့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ဖို့ဆိုရင် ဒီလို ပိတ်ဆို့ တားဆီး မှုတွေက အဟန့် အတား တွေဖြစ် စေတယ်။ အဟန့် အတား တွေကို ကျနော် တို့က တတ်နိုင် သလောက် ဖယ်ရှား ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ ဒီသဘော လောက်ပါပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ သံသယတွေ ဖြေဖျောက် သွားပြီ ဆိုရင်တော့ မကြာခင်မှာ ရုတ်သိမ်း မှုတွေ လုပ်လာ မှာပေါ့။ သမ္မတကြီး ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာ ပြည်သူ လူထု အနေနဲ့ လွတ်လပ် မှုတွေ အခု ပိုပြီး ရလာတဲ့ အချိန်မှာ တချို့လည်း ကျင့်သား မရသေး ဘူးလို့ ပြောသွား ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒေါ်အတာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်း လေးတခုကို ကျနော် တွေ့ပါတယ်။ ဒေါ်အတာ ကတော့ ဒီက ၀ါရှင်တန် ဒီစီမှာ လူငယ်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို တက်တက် ကြွကြွ လုပ်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီး တဦးပါ။ သူက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ တရား ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ သမ္မတကြီးတို့ အစိုးရ အနေနဲ့ လုပ်ကိုင် နေတာ လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင် ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အတာ။ ။ မင်္ဂလာ ပါရှင်။ သမ္မတကြီးကို ကျမ အနေနဲ့ မေးချင် တာက လက်ရှိ အခြေ အနေက ရရှိ ထားတဲ့ ပါဝါ အနေနဲ့ ကျမတို့ ဒီ ၂၀၀၈ ဥပဒေ ဆိုတဲ့ လူတစု အတွက် ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ဘယ်တော့ ပြင်မှာလဲ ဆိုတာကို ကျမ အနေနဲ့ သိချင် ပါတယ်။ နောက် တခုက ကျမတို့ အခု လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ လက်ပံတောင်း တောင်မှာ တရုတ် ကိုလိုနီ တွေအနေနဲ့ သိမ်းပိုက် နေတဲ့ လယ်ယာ ဘယ်တော့ ရပ်တန့် မှာလဲ။ အဲဒီ ရပ်တန့် မှုတွေ အပေါ်မှာ လူထု အနေနဲ့ နှိုးကြွ လာမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြ မှုတွေ ဖြစ်လာ တဲ့အခါမှာ ဆန္ဒပြမှု တွေကို မျက်လှည့် ပြတဲ့ အနေနဲ့ ကျမတို့ ဒီနေ့ပဲ၊ နောက်အပတ် လောက် ဆိုရင်တော့ ဒီပဲရင်း ဆယ်နှစ် ပြည့်ပါ တော့မယ်။ ဒီပဲရင်းကို လုပ်ကြံ ခဲ့တဲ့ လူတစု အနေနဲ့ ကျမတို့ ဗမာ ပြည်သူ လူထု တွေကနေ ပြီးတော့ ကုလားနဲ့ တိုက်ပြီးတော့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း လုပ်နေတဲ့ ဟာကို သမ္မတကြီး အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်း နိုင်မလဲ၊ အရေးယူ ပေးနိုင် မလဲ ဆိုတာ သိချင် ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တချို့ ကိစ္စ တွေကလည်း တဖက်က အမြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်က အမြင် ဆိုတော့ အလုံး စုံတော့ မှန်ချင်မှ မှန်မယ်ပေါ့။ တဖက် ထဲက ကြည့်ရင်တော့ ၀ါးခြမ်းပဲ မြင်နေ မှာပါ။ ဒီဘက်က ကြည့်ရင် လည်း ၀ါးခြမ်းပဲ မြင်နေ မှာပဲ။ နှစ်ဘက် လုံးက လှည့်ပတ် ကြည့်မသာ ၀ါးလုံး ပါလား ဆိုပြီး သိရမှာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဟာ လူတစု အတွက် မဟုတ် ပါဘူး။ လူအများ ထောက်ခံ အတည် ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာ သော့ခတ် ထားတဲ့ သံမဏိမျိုး ဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မှာ ပြင်ဆင် နိုင်တဲ့ amendment ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင် မယ်ဆိုရင် ဒီ amendment သူ့မှာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း တွေရှိ ပါတယ်။ ဒီလုပ်ထုံး လုပ်နည်း တွေအတိုင်း ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
ဒီဟာက တချက် ပေါ့နော်၊ နောက် လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဆန္ဒပြ နိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးတွေ နိုင်ငံတော် ကနေပြီးတော့ တရားဝင် ဥပဒေနဲ့ ပြဌာန်း ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်က ဒီဥပဒေနဲ့ အညီ ပြဖို့ ပြုဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စ တွေဟာ ကျနော်တို့ အစိုးရ ဖြစ်လာ တော့မှ ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ ကိစ္စတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက စာချုပ် စာတမ်းအရ လုပ်ခဲ့ ပြုခဲ့ ကြတဲ့ ကိစ္စ ကျနော် တို့က ၀င်ပြီး ဖြေရှင်းပေးတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ ရက်ရက် စက်စက် သတ်တယ် ဖြတ်တယ် ဆိုတာလဲ intentionally လုပ်တာ ပြုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရဲကတော့ တရား ဥပဒေ ထိန်းသိမ်း ရေးအရ တကမ္ဘာလုံးမှာ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် ထိန်းသိမ်း နည်းတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်း ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လည်းပဲ ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေ ကျနော်တို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ တဦးပါ။ ဘုန်းကြီး ရဟန်းကို ရှိခိုး ဦးခိုက် နေရ ပါတယ်။ ဒီဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေလည်း ကျနော်တို့ ဒီလို ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ မရှိပါဘူး။ သို့သော်လဲ ကျနော်တို့ မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ အခန့် မသင့်ပဲနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ တွေပါပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြော ရမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြင်နိုင်ပါတယ်။ Amendment ကျနော်တို့ရှိတယ်။ လူတစုအတွက်ဆိုတာကတော့ စွပ်စွဲတာပဲဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ ရာခိုင်နှုံးအားဖြင့် ပြောလို့ရတယ်။ ပြည်သူလူထု ဘယ်လောက်ထောက်ခံလဲ ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ ပထမ၊ ဒုတိယစာမျက်နှာတွေမှာ ကျနော်တို့ ပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ဒါ သံမဏိစည်းမျဉ်းဟုတ်ဘူး။ သော့ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ amendment ကျနော်တို့ ပေးထားတယ်။ လွှတ်တော်က ပြင်နိုင် တယ်။ ပြည်သူက ပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားကျနော်တို့ရှိပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ကျနော် ဖြည့်စွက် မေးချင်တာ လေးတစ်ခု ကတော့ အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ရေးနဲ့ ပတ်သက် လို့ပေါ့။ လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဆိုလည်း နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု စပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထောက်ပြ နေကြတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ကတော့ လွှတ်တော် ထဲမှာ စစ်တပ်က ၂၅ % ပါနေတဲ့ ကိစ္စ ပေါ့နော်။ အဲဒီ ကိစ္စကို ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်ဖို့၊ ပြင်ဆင် ဖို့လည်း လွှတ်တော် ထဲမှာ ဆွေးနွေး နေကြ တာတွေ၊ တင်ပြ လာတာ တွေလည်း ကျနော်တို့ ကြားရ ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတ ကြီးတို့ အစိုးရ ပိုင်းရဲ့ သဘောထား ကရော ဘယ်လို ရှိပါသလဲ၊ သိချင် ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ – ခင်ဗျား တို့လည်း သိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး စပြီးတော့ ကြိုးပမ်း ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးပါ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက တပ်မတော်ကို ဖွဲ့ပေးလိုက် ပြီးတော့မှ ဒီ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူ လူထု ပူးပေါင်းပြီး လွတ်လပ်ရေး ရအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် တို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ တပ်မတော်ဟာ — (၁း၀၁) အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ပိုင်း မှာလည်း လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အတူ ပေါက်ဖွား လာတဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ ဆူဆူ ပူပူ ဖြစ်ပြီးတော့ အစိုးရ တောင်မှာ ရန်ကုန် အစိုးရ ဆိုပြီးတော့ တောင်မှ ပြောတာ ဆိုတာ ခံရတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်က အခုနကလို သောင်းကြမ်းမှု အန္တရာယ်တွေနဲ့ ဒုက္ခ သုက္ခတွေ ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ တပ်မတော်ကပဲ ဝင်ပြီးတော့မှ ဒီအခက် အခဲတွေ၊ အကျပ် အတည်းတွေ- ဒါတွေကို ဝင်ပြီး ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ အနေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ တပ်မတော်ဟာ ကျနော်တို့ သမိုင်းကြောင်း အခြေခံတွေက တခြား နိုင်ငံက တပ်မတော် တွေနဲ့ တူချင်မှ တူမယ်ပေါ့လေ။
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်း မှာလည်း ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်း ပြီးတော့ မှ ဆောင်ရွက် ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ အခက် အခဲ အကြပ် အတည်းတွေ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အခါမှာလည်း အခုန ကလို တပ်မတော်ဟာ ကျရာ အခန်း ကဏ္ဍ ကနေပြီး ပါဝင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ကို ပစ်ပယ်ထားဖို့ မသင့်ဘူး လို့ကျနော် ဒီလို ထင်ပါတယ်။ တပ်မတော်ကို ပစ်ပယ် ထားလို့ မရပါဘူး။ ပြည်သူနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော် အခန်းကဏ္ဍ တစ်ရပ် အနေနဲ့ ဆောင်ရွက် နေရမှာပါ။
အဲဒီတော့ လွှတ်တော် ထဲမှာ ပါနေတယ် ဆိုတဲ့ ဟာက အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်း စဉ်မှာ တပ်မတော်က ပါဝင်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ဒီလို ပြောလို့ ဒါတော့ မမှန်ဘူးလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရင့်ကျက် လာတဲ့ အမျှ လွှတ်တော် ထဲက တပ်မတော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ လျော့ပါး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားတို့ ဘာတို့ ပြောင်းသွား တာလည်း ဒီအတိုင်း ပါပဲ။ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကွာ လို့တော့ မရပါဘူး။ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ အခက် အခဲတွေ အကြပ် အတည်းတွေ တွေ့တိုင်း၊ တွေ့တိုင်း တပ်မတော် ကနေ ဝင်ရောက်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ တာတွေ ရှိပါတယ်။ ၂၅ % ဆိုတာက လွှတ်တော် ထဲမှာ လောလော ဆယ်မှာတော့ ရှိသင့် ရှိထိုက်တယ်၊ သို့သော် လည်းပဲ တဖြည်းဖြည်း ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ လျော့ပါး လာမယ်၊ နည်းပါး လာမယ်- ဒီလိုပဲ မြင်မိ ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ကိစ္စ တွေဟာ အင်မတန် အပြု သဘော ဆောင်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေအပေါ်ကို တစ်ခါ တစ်ခါ — တဲ့ အမည်းစက် တွေ ရှိပါတယ်။ ရုပ်ဆိုး အကျည်း တန်တဲ့ ကိစ္စရပ် တွေပေါ့နော်။ အထူး သဖြင့် ရခိုင် ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ လိုမျိုး၊ ဘာသာ ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဓိကရုဏ်း တွေပေါ့နော်။ ဒီကိစ္စ တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်ရဲ့ အပြုသဘော ဆောင်နေတဲ့ အခြေ အနေတွေ ကြားထဲမှာ လက်ညှိုး ထိုးပြစရာ အမြင်မျိုး ဖြစ်နေ တယ်ဆိုတော့- ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဘာသာရေး အကြောင်း အရာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ မေးမြန်းဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဦးဝင်းအောင် ရှိနေပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင် အနေနဲ့ ထပြီးတော့ မေးနိုင် ပါတယ်။ ဦးဝင်းအောင် ကတော့ အစောပိုင်းက ကျနော်တို့ ဗွီအိုအေရဲ့ ဌာန ဝန်ထမ်း ဟောင်းပါပဲ။
ဦးဝင်းအောင်။ ။ ကျနော် ဝင်းအောင်ပါ။ ကျနော်တို့ ညီအကို မောင်နှမ ၁၂ ယောက် ရှိတယ်။ မြန်မာ ပြည်က ထွက်လာ ပြီးတဲ့နောက် အနှစ် ၂၀ ကြာတဲ့ အခါမှာ တော်တော် များများ ကွယ်လွန် သွားတာ – အခု ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုအရ ကျနော် မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက် ပြီးတော့ လည်ပတ်ခွင့် ရတဲ့ အခါမှာ အသက် မသေ ရှင်ကျန် နေတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ တွေကို မသေခင်မှာ တွေ့ရတဲ့ အတွက် သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း အရင် ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော် ဗွီအိုအေမှာ ၁၅ နှစ် မလုပ်ခင် မြန်မာ့ အသံမှာ အနှစ် ၂၀ လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အင်္ဂလိပ် ကျွန်ခေတ်မှာ မွေးပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ် ကိုလည်း ကြုံပါတယ်။ နောက် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်တော့ လည်းပဲ ကျနော်တို့ ကွန်မြူနစ် အုပ်စိုး တာတို့-ဘာတို့ ဖြစ်လာတော့ နောက် ကျနော် မြန်မာ့ အသံမှာ အနှစ် ၂၀ လုပ်တဲ့ အခါမှာ အိမ်စောင့် အစိုးရ- စသဖြင့် ခေတ်အဆက် ဆက် နောက်ဆုံး ခေတ်အဆက် ဆက်ကို ကျနော် ကြုံခဲ့ ပါတယ်။ ကျနော် သတင်း စာဆရာပါ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ကလောင်ကိုင် ခဲ့တဲ့သူပါ။ အဲဒီ တော့ကာ ဒီလို မြန်မာ ပြည်မှာ ပေါ့လေ- ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် အင်မတန်ကို ဝမ်းသာ စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျနော်တို့ မြန်မာ ပြည်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ မြန်မာ ပြည်ကို ပြန်သွား ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ၊ အခုနက သမ္မတကြီး အမိန့် ရှိသလို ကျနော် တို့က အမြတ် ထုတ်ဖို့၊ Invest လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် အခုနက ပြောသလို ကျနော့် ညီအကို မောင်နှမ အရင်းတွေ အဲဒီမှာ ရှိနေ ပါမယ်။ အဲဒီတော့ကာ မကြာသေး ခင်က ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အင်မတန် အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတာက မြန်မာပြည် အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ သိကြတယ်၊ မြင်ကြတယ် ဆိုတာကို မသိရ ပေမဲ့လို့ ပြည်ပမှာ ကတော့ သမ္မတကြီး လည်း သိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဒီကနေ့ ခေတ်ပေါ် တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာ တွေအရ သမ္မတကြီး အိမ်မှာ နေ့လည်စာ ဘာတို့စရာနဲ့၊ ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲဆိုတာ ကိုတောင်မှ သိလို့ မြင်လို့ ရတဲ့ အခြေ အနေမျိုး ဖြစ်သွား ပါပြီ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဦးဝင်းအောင်ခင်ဗျာ။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဦးဝင်းအောင် မေးစရာရှိတာကို မေးပေးပါ။
ဦးဝင်းအောင်။ ။ ဒီလို ဘာသာရေး အကျည်းတန်၊ အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြင်ပမှာ မြင်နေရတဲ့ အတွက်က သမ္မတကြီး ဦးဆောင်တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း စဉ်ကို အင်မတန် အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုး စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီ မုန်းတီးရေးကို ဖန်တီးနေတဲ့- ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း လုပ်နေတာကို တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အရ ဘယ်လိုမှ ဘာကြောင့် အရေး မယူလဲ ဆိုတာ – ကျနော်ဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မူဆလင် တစ်ယောက်ပါ။ မွတ်ဆလင် တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကျနော် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာ မွေးတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ဝမ်းနည်း ပါတယ်။ နောက် အနှစ် ၅၀ သတင်း သမား တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကျနော် အံ့သြမိ ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်၊ ဦးဝင်းအောင် ခင်ဗျ။ မေးချင်တဲ့ သဘောတော့ ကျနော် နားလည် ပါတယ်။ ကျနော် နားလည် တာက လက်ရှိ မုန်းတီး ရေးတွေ လှုံဆော် နေတာ တွေကို ဘာကြောင့် အရေး မယူ သလဲ၊ အရေး ယူမှု ရှိသလား ဆိုတာကို သိချင်တယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ကျနော် ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး အရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တွေလုပ်တယ်။ တခါ စီးပွားရေး အရ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုတွေ လုပ်တယ်။ အဲတော့ အောင်မြင်မှု တွေလည်း ကျနော်တို့ အထိုက် အလျောက် ရပါတယ်။ အခက် အခဲတွေ စိန်ခေါ် မှုတွေ ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ တွေ့ရ ပါတယ်။ အဲတော့ ရခိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ တွေက ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ထပြီးတော့ ဖြစ်ကြတဲ့ ပုံစံ မျိုးတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ ရာဇ၀တ် ပြစ်မှု အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လူအုပ်စု တစုနဲ့ တစု မီးရှိုကြ အကြမ်း ဖက်ကြနဲ့မှ ကြီးထွား လာတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ပါတယ်။ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှာ ဟိုဖက်က ဒေါက်တာ ပါပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒေါက်တာ နဲနဲလေး ဖြေပေးလိုက်ပါ။
ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်။ ။ အချိန် အရ ဆိုတော့ အများ ကြီးတော့ ကျနော် မပြော တော့ပါဘူး။ သို့သော် ခြုံပြီး ပြောမယ် ဆိုရင် တဖက်နဲ့ တဖက် ယုံကြည် မှုတွေ လျှော့ပါး နေတာတွေ၊ နောက်ပြီး မုန်းတီး မှုတွေ ရှိနေတာက မြန်မာ ပြည်မ မှာရော ရခိုင် ပြည်နယ် မှာပါ အတော် ကြာကြာ ရှိနေပြီး သားပါ။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တွေလုပ် လာတဲ့ အခါ ပွင့်လာ တဲ့အခါ မကျေနပ်မှု တွေကို ပိုပြီး ပြလာတဲ့ အခြေ အနေမှာရှိတော့ ဖြစ်သွားတဲ့ ရာဇ၀တ် မှုပေါ် မူတည် ပြီးတဲ့ အခါမှာ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ Community Level မှာပဲ အဓိက ဖြစ်ခဲ့ တာပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ Report ကိုလည်း လူပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော် လောက်ကို အင်တာ ဗျူးပြီး ရေးခဲ့ တာပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက် လို့လည်း Online မှာ အင်္ဂလိပ် လိုရော မြန်မာ လိုရော ရပါမယ်။ အဓိက ပြောချင် တာက မကျေ နပ်မှုတွေ မုန်းတီး မှုတွေက အရမ်းများ လာတဲ့ အခါမှာ အခွင့် အရေး ယူပြီး မြောက်ထိုး ပင့်ကော်မှု တွေကလည်း အများကြီး ပါလာတယ်။ အဲဒီ ပါလာတဲ့ အပိုင်း တွေက အခြေ အနေ တွေကို ပိုပြီး ဆိုးသွား စေတာပါ။ နောက် အစိုးရ အနေနဲ့ အရေး ယူမှု မပြုဘူး ဆိုတာ အဲဒါတော့ မဟုတ် ပါဘူးဗျ။ မိတ္တီလာမှာ ပြီးပြီးတဲ့ အချိန် မှာလည်း အရေး ယူမှုတွေ အများကြီး လုပ်ပါတယ်။ ရခိုင် မှာလည်း ကျနော် တို့က အရေး ယူမှုတွေ အများကြီး လုပ်ပါတယ်။ ရခိုင် မှာလည်း အရေး ယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ကော်မရှင် အနေနဲ့က အားလုံးကို ကြည့်ခွင့် ရတဲ့ အတွက် အရေး ယူမှု တွေက အများကြီး လုပ်ထား ပါတယ်။ နောက်ဆုံး တခု ပြောချင် တာက ဒီအစိုးရ အနေနဲ့ ဘာမှ လုပ်မထား ဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Interfaith Dialogue တွေကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာနဲ့ လုပ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ရခိုင် ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ဖွံဖြိုး တိုးတက်ရေး တွေကနေ ဒါတွေကို လုပ်နေ ပါတယ်။ ရခိုင် ကော်မရှင် ကိစ္စ ပြီးသွားတော့ ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင် ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ပြီး လုပ်နေ ကျနော်တို့ အကြံပြု နေတယ် ၀င်ပြီး ကူညီ နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ Interfaith Dialogue တွေကို ရန်ကုန် မှာလည်း လုပ်နေ ပါတယ်။ ရခိုင် မှာလည်း အဖွဲ့တွေက အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င်တွေ ဗုဒ္ဒ ဘာသာဝင်တွေ အတူတွဲ သွားပြီးတော့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်ဖို့ ၀ိုင်းပြီး လုပ်နေ ကြပါပြီ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ။ ကိုသန်းလွင်ထွန်းရေ ကျနော်ကို ခွင့်ပြုပါ။ ကျနော် အစီ အစဉ် လေးတခု ရှိနေလို့ ။ ကျန်တဲ့ မေးခွန်း တွေကို ဖြေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ သမ္မတကြီး။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ခင်ဗျ။
This entry was posted in Articles, Interviews, News. Bookmark the permalink.
← အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁)
မိတ္တီလာမြို့ရှိ မုစ်လင်မ် သင်္ချိုင်းအား တစ်ပတ်အတွင်း ဖယ်ပေးရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိ →